Anker PowerConf C300, smart webcam uye mhinduro yehunyanzvi | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 01/06/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 27/05/2021 20:04 | General, Reviews
Teleworking, misangano, yekusingaperi yevhidhiyo kufona ... Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti webcam uye maikorofoni ye laptop yako yanga isina kunaka sezvawaitarisira, kunyanya izvozvi kuti rudzi urwu rwekutaurirana kwedijitari rwave rwakajairika. Nhasi tinokuunzira mhinduro inoratidzika kwazvo kune ese aya matambudziko.
Isu tinoongorora iyo itsva Anker PowerConf C300, yakakwira-inoshanda webcam ine FullHD resolution, Wide Angle, uye Artificial Intelligence maficha. Tsvaga nesu zvese hunhu hweichi chakasarudzika mudziyo uye ndeapi masimboti akasimba achienzaniswa nevakwikwidzi vakananga, uyezve nezvayo zvisina kusimba mapoinzi.
2 Kuisirwa uye inogadziriswa software
3 Shandisa ruzivo
4 Zvayakanakira nezvayakaipira
Isu tatoziva Anker zvisati zvaitika, ikambani inokombamira kubhejera zvigadzirwa zveprimiyamu uye zvigadzirwa muzvigadzirwa zvayo, chimwe chinhu icho hukama hwayo hwemutengo hunonyatsojekesa kwatiri. Kana iri dhizaini, ine fomati yakajairika, isu tine yepakati pani apo iyo sensor inotungamira pakati, yakakomberedzwa nerin'i yerin'i ine mhete yatinozoverenga kugona kwayo. 1080p (YakazaraHD) kubatwa ne60FPS furemu mitengo. Musana wacho wakagadzirwa nepurasitiki yematte iyo inopa manzwiro ehunhu uye kusimba kunoshamisa. Iyo ine yekuvhura kwetambo mune ino imwe kumashure chikamu USB-C iyo inoshanda seye chete chinongedzo.
Iyo USB-C tambo ndeye 3m kureba
Iyo yekupedzisira ipfungwa yakanaka nekuti inokutendera iwe kutora mukana weimwe nzvimbo. Nezve rutsigiro, iine rutsigiro muchikamu chezasi, chinogadziriswa kusvika 180º uye neshinda yekutsigira sikuruu kana yakasarudzika katatu. Iyo ine mamwe maviri ekutsigira mapoinzi ane masenduru e180º uye pakupedzisira nzvimbo yepamusoro, iko iko kamera Izvo zvichatibvumidza kuti titenderedze iyo 300º yakatwasuka uye imwe 180º yakatwasuka. Izvi zvinobvumidza kamera kugadziridzwa kuti ishandiswe patafura, patripodhi kana nenzira yekutsigira pamusoro pechiono, uko kwaisingazotora nzvimbo pachiratidziri.
Panyaya iyi tinowana kuwedzera kunonakidza, kunyangwe tisina nzira yekuvhara yekuvhara iyo lens yakabatanidzwa mukamera, Hongu, Anker inosanganisira zvivharo zviviri zvine inotsvedza fomati mupakeji uye kuti anonamira, tinogona kuzviisa uye kuzvibvisa pamadiro pane iyo sensor, nenzira iyi isu tinokwanisa kuvhara kamera uye kuona kuti havasi kutirekodha, kunyangwe kana vakabatana nayo. Nekudaro, isu tine chiratidzo chemberi che LED icho chichatinyevera nezve mamiriro ekushanda kwekamera.
Kuisirwa uye inogadziriswa software
Mukukosha iyi Anker PowerConf C300 iri Plug & Tamba, neizvi ndinoreva kuti ichashanda nemazvo chete nekuibatanidza kune chiteshi USB-C yekomputa yedu, zvisinei, isu tinoperekedzwa ne USB-C kune USB-A adapta yezviitiko pazvinenge zvakakodzera. Yayo yekunyepedzera njere sisitimu uye autofocus kugona kunofanirwa kukwana kwedu kwezuva nezuva. Nekudaro, zvakakosha kuti uve nerutsigiro software, mune ino nyaya yatiri kutaura nezvayo AnkerWork kuti iwe unogona kurodha mahara, mairi tichawana sarudzo dzakawanda, asi chakanyanya kukosha mukana wekuvandudza webcam software uye nekudaro uchiwedzera rutsigiro rwayo.
Mune software iyi isu tichakwanisa kugadzirisa matatu ekuona angles e 78º, 90º uye 115º, pamwe nekusarudza pakati pezvinhu zvitatu zvekutapa pakati 360P uye 1080P, kuenda kuburikidza nemukana wekugadzirisa iyo FPS, kumisikidza uye kumisa iyo inotarisa, iyo HDR uye a Anti-Flicker basa Inonakidza kwazvo kana isu tichivhenekerwa nemabhuru eLED, iwe unotoziva kuti mune idzi kesi flickers dzinowanzoonekwa dzinogona kutsamwisa, chimwe chinhu chatichazonyanya kunzvenga. Zvisinei nezvose, isu tichava nematatu emhando dzakasarudzika zvichienderana nezvatinoda izvo mukufungidzira tora mukana wakazara weAnker PowerConf C300:
Tinokukurudzira iwe muchiitiko chaunofunga pane ino kamera inowanikwa paAnker webhusaiti uye paAmazon, kuti unomhanyisa kuisa Anker Work uye tora mukana wekuvandudza firmware yekamera, sezvo zvichange zvichidikanwa kumisa nekumisa iyo HDR basa.
Iyi Anker PowerConf C300 inosimbiswa nekushandisa kwayo nemashandisirwo akadai seZoom, nenzira iyi, tafunga kuti ichave kamera yekushandisa huru kutepfenyura kweiyo iPhone News Podcast Mairi kubva kuActualidad Gadget isu tinotora chikamu vhiki nevhiki uye kwauchazokwanisa kukoshesa mhando yemufananidzo. Nenzira imwecheteyo, isu tine mamaikorofoni maviri ane anonzwika ekudzimisa odhiyo kuti abate zvakajeka izwi redu uye kubvisa inzwi rekunze, chimwe chinhu chatakakwanisa kuratidza kuti chinoshanda zvinoshamisa.
Iyo kamera inobata zvakanaka mune yakaderera mwenje mamiriro sezvo iine mufananidzo wekugadzirisa mamiriro ezvinhu aya otomatiki. Hatina kuwana chero matambudziko ekushanda mu macOS 10.14 zvichienda mberi, kana mushanduro dzeWindows dzakakwirira kupfuura Windows 7.
Pasina mubvunzo inofungidzirwa sechishandiso chakasimba pamisangano yedu yebasa nekuda kwehunhu hwemaikorofoni uye kugona kwazvinotipa, kana ukafunga kubheja paAnker PowerConf C300 pasina kupokana hausi kuzokanganisa, kusvika parizvino, akanakisa taedza. Zviwane kubva ku129 euros paAmazon kana pane yayo webhusaiti.
Yakatumirwa pa: 1 June we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: May 27 we2021
Yakakwira-mhando zvigadzirwa uye dhizaini
Yakanaka kwazvo mhando yemhando
Yakakura kurira kubatwa uye autofocus
Software inovandudza usability uye tsigiro yakanaka
Kutakura bhegi kunoshaikwa
Iyo software iri muChirungu chete
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Anker PowerConf C300, smart webcam uye mhinduro yehunyanzvi